Skypecast #2 Miaraka Amin’i Sokari Ekine · Global Voices teny Malagasy
Skypecast #2 Miaraka Amin'i Sokari Ekine
Voadika ny 17 Desambra 2017 16:26 GMT
(Fanamarihana : Lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jona 2005)
Sokari Ekine – aka “Owukori” – dia iray amin'ireo blaogera tena fantatra indrindra sy ireo be mpamaky indrindra momba an'i Afrika. Manoratra ireo blaoginy roa avy ao an-tranony any Andalozia, Espana – Black Looks sy Afrotecnik – mandrakotra ireo tantara avy amin'ny lafivalon'ilay tanibe, miaraka amin'ny tsindrim-peo manokana mikasika ny olan'ireo vehivavy ary ny ao Nizeria toerana nahaterahany.
Ny resadresakay, noraiketina tamin'ny alalan'ny Skype omaly tolakandro, dia ahitana ireo jeritodika mikasika ny anjara toeran'ny finday ao anaty fifandraisana mitombo hatrany ao Afrika, ireo sakana izay mahatonga ny fanaovana blaogy ho sarotra ao Afrika ary ny maha-zava-dehibe ny fisarihana ny sain'ny olona hijery ireo olan'ny zon'olombelona. Amin'ny fotoana indrindra izay hitondranay resaka mikasika ny “ady amin'ny fampihorohoroana” ao Etazonia, tapaka ny fifandraisana. Rehefa tsikaritra fa hoe, tsy notapahana izahay noho ny fanarahamaso ataon'ny governemanta mampihoron-koditra, fa vokatry ny tsy fahaizanko ny resaka hetra sy ny ara-teknika.
Tena lafatra ny fahenoana, mandra-pahatongan'ilay fahatapahana tampoka. Ary hamerina an'i Sokari tsy ho ela eo amin'ny fifandraisana izahay mba hanohizana ny resadresaka. Eo ampiandrasana, manolotra blaogy vitsivitsy i Sokari ho an'ny mpanangona ato amin'ny Global Voices… sy ho an'ireo izay mitady ireo feo mampientanentana avy ao Afrika.
TRAE days, avy amin'ny Abuja, Nigeria.
Startle The Echoes (rohy tapaka tsy mandeha intsony)
sy izay ankafiziny ankehitriny:
Tetikasa Demaokrasia ao Kenya.
Henoy ny resadresakay. (mp3, 30 minitra, 16.9MB)